Gear Guru | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Jobs » Gear Guru
Furitaanka Shaqada: Gear Guru
tartan rasmi ah
Tayada Xakamaynta Tayada Qalabka Guryaha Kirada
Dhawaaqa xiisaha leh? Farxad inaad maqasho - fadlan qaado daqiiqad aad si dhammaystiran u akhrido qoraalkan. Hadana haddii aad u malaynayso inaad tahay qof ku habboon horay u sii wad oo codso.
Waxaan nahay guri kiro kamarad madaxbanaan oo ku yaal dhinaca Galbeed ee LA. Waxaan nahay koox yar laakiin ganacsi, waxaan diirada saareynaa inaan siino kamaradaha / muraayadaha / kamaradaha ugu dambeeya uguna wanaagsan macaamiisha dhamaan sooyaalka & miisaaniyadaha. Waxaan la shaqeynaa filim sameeyayaasha iyo shaqaalaha kaamirooyinka ee ka shaqeeya mashaariic fara badan, mar walbana waxaa jira caqabado cusub oo ku soo kordha iyo qaybo cusub oo qalab ah oo lagu barto.
Waa maxay Shaqadu?
Waxaan leenahay furitaan deg deg ah oo aan ku kala saarayo "Gear Guru." Xubin ka tirsan kooxdan ayaa noqon doonta laydh diiradda saaraya xakamaynta tayada shay kasta oo ka mid ah agabyadayada oo aanu ku ilaalino dhammaantood abaabul iyo ilaalin heerarka ugu sarreeya.
Ma waxaad tahay nooca xiisaha qoto dheer u leh kamaradaha, muraayadaha indhaha iyo tiknoolajiyada? Miyaad heshaa farxad aan ku xirneyn tiknoolajiyada cusub oo aad ku ogaatid sida ay u wada shaqeeyaan Miyaad farsamo ahaan maskax iyo awood u leedahay inaad ogaato inta badan dhibaatooyinka tiknoolajiyada kaligaa? Ma taqaanaa sida loo iibiyo? Miyaad ku raaxeysataa muuqaalka kamarad si fiican loo qabtay? Miyaad si fiican u baratay dhammaan kamaradaha hadda jira iyo muraayadaha indhaha ee loo adeegsado wax soo saarka filinka / TV-ga casriga ah? Ugu dambeyntiina - miyaad jeceshahay jawi dhib badan oo aad maalin walba hawlo cusub kugu soo tuurayso?
Hadday sidaas tahay - waa inaan wada hadalno.
• Ugu yaraan 2 sano oo waayo-aragnimo ah oo loo dejiyey doorka waaxda kamarad ku habboon.
• 2 sano oo waayo-aragnimo ah oo aan kaga shaqeynayay guri kiro ah oo laga kireysto kaalin ku habboon qalabka
• Shaqaynta aqoonta dhammaan noocyada waaweyn ee kamaradaha hadda jira (Arri, Red, Sony, Canon, iwm.)
• Ka shaqeynta aqoonta inta badan qalabka casriga ee kamaradaha iyo muraayadaha indhaha
• Kombuyuutar aad u fiican iyo xirfado abaabul
• Awood aad ku maamusho jadwalkaaga iyo hawlahaaga - self motivator
• Ugu yaraan 2 tixraac aad u fiican oo ka imanaya xirfadlayaal ku habboon xagga warshadaha
• Farsamo yaqaan muraayadaha indhaha ama adeegga khibrad u leh BIG lagu daray! Laakiin looma baahna
• Shahaadada jaamacadeed ee 4-sano ayaa la doorbidaa laakiin shahaadada 2-sano waa la aqbali karaa. Shahaadada xirfadeed ama caddeyn kale oo ku saabsan tacliinta sare waa la aqbali karaa kiis ahaan kiis ahaan.
Goorma ayey tan Bilaabanaysaa?
Waxaan jeclaan lahayn inaan helno qof diyaar u ah inuu dhulka ku dhufto bilowga Janaayo. Waxaan isku diyaarinaynaa sanad weyn sanadka 2021 waxaana ku faraxsanahay inaan balaarino kooxdeena isla markaana aan sii kordhino gaaritaanka iyo heerarka adeegga.
Waxaan sameyn karnaa wareysiyo zoom ah dabayaaqada bishaan oo ay nagu xigto wareysiyo shaqsiyeed sanadka cusub kadib. Haddii aan helno musharax ku habboon waxaan rajeyneynaa inaad bilowdid bartamaha Janaayo.
Mushaharka tartanka ee aagga LA ayaa lagu qiimeeyaa khibrad, kabitaan caymis caafimaad, gunno sanadle ah, siyaasad deeqsi ah oo PTO ah, iyo fursado loogu talagalay kaameradda iskeed u shaqeysa oo xadidan
Saddexda bilood ee ugu horreeya ee shaqada waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tijaabo tijaabo tijaabo ah oo mushahar saacadeed ah. Mar alla markii aad ka gudubto astaamahaas waxaad u qalinjabineysaa mushahar shaqaale caadi ah oo leh dhammaan faa'iidooyinka ku jira.
Fadlan ogow, MA Raadineyno qof kaliya shaqo ubaahan 6 bilood ama wax lamid ah, ama waxaan raadineynaa inaan wax dulmarino ilaa aan heeso bilowno. Waan fahansanahay baahidaas, laakiin ganacsi yar runti ma awoodi karno inaan waqti galino si aan kuugu soo qaadno xawaare kaliya aan ku waayi doono wax yar kadib - waxaan rabnaa qof diyaar u ah inuu kusii nagaado mustaqbalka dhow iyo kan dhexe, haddii waqti dheer. Waad ku mahadsantahay fahanka.
Sida loo Codsado:
Fadlan waxoogaa qaado oo hubi in resumeygaagu hadda yahay oo uu leeyahay khibrad ku habboon. Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinaynaa inaad qorto warqad kooban oo dabool ah oo sharraxaysa sababaha aad u rabto inaad uga shaqeyso warshadan iyo waxa kaa dhigaya inaad tahay musharrax u gaar ah. Ugu dambeyntiina, hubi inaad ku darto tixraacyada kuwaas oo ah dad ku habboon qafiska kamaradda. / dunida guri kiro ah
Markaad intaas oo dhan hesho u soo dir mawduuca cinwaanka: Gear Guru Job
Next: Audio fiicni